Vokatra tsy mety/Fitakiana fanafody | Orinasa Mpampanoa lalàna
Olana tsy mety / mitaky fanafody
Ny karazana vokatra rehetra, avy amin'ny entana ao an-tokantrano, na kilalao, fitaovana, fiara, ary milina indostrialy dia tsy maintsy atao sy vokarina amin'ny fomba azo antoka. Ny mpanamboatra dia tokony hamantatra ireo loza rehetra notadiavina.
Fanafody sy fanafody mahomby
mpisolovava maratra manokana hanampy anao hanohy ny vokatra na fitakiana fanafody.
Ireo loza ireo dia tokony hampitandremana, arovana sy tsy hoentina. Saingy, raha mijaly amin'ny ratra ianao noho ny vokatra na fanafody, dia afaka miresaka amin'ny mpisolovava ratra manokana ianao mba hanampiana anao hitaky ny fatiantoka vokatra na fanafody fitsaboana.
Isan-taona dia fanafody fanafody an-tapitrisany no nosoratana hanamaivana na hanasitranana ny vokatry ny aretina na ny aretina. Raha maro no vokatra sy fanafody fanafody maro dia mahomby sy azo antoka, ny vokatra ireo dia mbola mety manimba ny mpampiasa. Ny ankamaroan'ny fotoana, ny orinasa mpamatsy zava-mahadomelina dia laharam-pahamehana ho an'ny mpiombon'antoka ary vola miditra amin'ny fiarovana ny marary.
Betsaka ny olona tsy manao fikarohana ny fanafody natolotry ny dokotera azy. Matetika ny olona no mihevitra fa tsy hanisy ratsy ny zava-mahadomelina. Saingy, tato anatin'ny taona vitsy, ny fanafody isan-karazany dia nampiseho ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana hoe inona ireo fanafody napetrakao ao amin'ny rafitrao. Ny dokotera iray manam-pahaizana manokana momba ny fatiantoka dia nilaza fa ny mpisolovava dia afaka manampy ireo iharan'ny fanafody manimba. Noho ny fitoriana mahomby amin'ny tsy fahampiana fanafody, dia afaka mahazo tamberim-bidy amin'ny vidin'ny fanafody fanafody ianao, volavolan-dalàna sy ny fatiantoka hafa noho ny zava-mahadomelina.
Karazan-doka amin'ny vokatra
Misy karazana lesoka telo amin'ireo vokatra mandrafitra ny famoahana entana:
Ny lesoka amin'ny famolavolana dia mitranga rehefa misy vokatra iray izay nahatonga ny ratra nataonao ny vokatra iray. Fenitra roa no ampiasaina amin'ny famaritana ireo lesoka amin'ny famolavolana, izany hoe ny fenitry ny risika-risika ary ny fenitry ny fanantenan'ny mpanjifa. Ny fenitra andrasan'ny mpanjifa dia misy ifandraisany amin'ny tsy naneken'ny vokatra ny zavatra nantenain'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, ny fenitra fampiasa amin'ny risika dia miresaka momba ny fampiasana ny vokatra iray mihoatra noho ny loza ateraky ny fampiasana azy na tsia.
Ny tsy fampitandremana tsy ampy amin'ny vokatra dia rehefa tsy mampitandrina ny mpanjifa ny mety hisian'ireo loza sy loza mety hitranga amin'ny fampiasana azy ireo. Ohatra, ny tohatra izay novidinao vao haingana dia tsy nanana fahasimbana famokarana, nefa tsy nampitandrina anao izany momba ny lanjan'ny lanjany, nahatonga azy io hihena izany rehefa mametraka boaty lehibe eo amin'ny talantalana ambony ianao.
Ny lesoka amin'ny fanamboarana dia somary hafa noho ny vokatra mety manisy endrika endrika marika nefa tsy mety noho ny fahadisoana mpanamboatra. Ohatra, ny ankamaroan'ny tohatra izay amboarin'ny orinasa iray dia mety ho mandeha tsara fa ny tohatra novidinao dia nivadika ary nahatonga anao hilatsaka noho ny orona tsy mety diso. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, tsy mba maloto ny famolavolana ny vokatra fa kosa ny famoahana entana fa tsy.
Vokatra na fanafody mahamenatra
Ny mpisolovava amin'ny vokatra iray na ny mpitsabo dia manana ny traikefa ilaina mba hanampiana anao hifampiraharaha amin'ny orinasam-piantohana sy ireo fety hafa ho anao. Ireo mpisolovava ireto dia mpisolovava amin'ny fahaizana mahay ihany koa mahay ny fomba hisolo tena anao mandritra ny raharahan'ny vokatrao amin'ny fitsarana amin'ny fomba tena masiaka. Izy ireo koa dia hanazava aminao ny safidy ara-dalàna rehetra, hitari-dalana anao mandritra ny fizotran'ny raharaham-pitsarana ary hiasa mafy hamahana ny olanao ara-dalàna.
Izahay no mitantana ny lafiny rehetra amin'ny raharahao
Raha naratra ianao noho ny fampiasana ny fanafody fanafody, dia mety hanana fangatahana vokatra tsy mahomby ianao. Mila ny torohevitry ny mpisolovava voarary manokana ianao.